जेली फिशबाट अल्ट्रासोनिक कोलेजेन एक्स्ट्र्याक्शन - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
जेलीफिश कोलागेन एक उच्च गुणस्तर कोलागेन हो, जुन अद्वितीय छ तर I, II, III टाइप गर्न को लागी समान गुणहरू प्रदर्शन गर्दछ र V कोलेजन टाइप गर्नुहोस्।
अल्ट्रासोनिक निष्कर्ष एक विशुद्ध यांत्रिक प्रविधी हो, जुन उपज बढ्छ, प्रक्रियालाई गति प्रदान गर्छ र उच्च आणविक वजन कोलाजन उत्पादन गर्छ।
अल्ट्रासोनिक जेलीफिश निष्कर्षण
जेलीफिश खनिज र प्रोटीनमा अमीर छ, र कोलेजन यी जिलेटिन समुद्री प्राणीहरूमा एक प्रमुख प्रोटीन हो। जेलिफिश महासागरमा लगभग प्रचुर मात्रामा स्रोत पाइन्छ। प्रायः एक प्लेगको रूपमा देखा पर्यो, कोलेजन निकासीको लागि जेलीफिशको प्रयोग दुवै तरिकामा फायदेमंद हुन्छ, उत्कृष्ट कोलोजनको उत्पादन, एक स्थायी प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरी जेलीफिश ब्लूलाई हटाउँदछ।
अल्ट्रासोनिक निष्कर्ष मेकेनिकल निष्कर्षण विधि हो, जुन कच्चा पदार्थको उपचारमा ठीकसँग नियन्त्रण र अनुकूल हुन सक्छ। अल्ट्रासोनिक निकासी सफलतापूर्वक कोलाजेन, ग्लिकोप्टोनिन र जेलीफिशबाट अन्य प्रोटीनहरू अलग गर्न लागू गरिएको छ।
सामान्यतया, प्रोसेन्स जेलीफिश प्रदर्शनलाई बलियो एन्टिओक्सिडेंट गतिविधिबाट अलग गरिएको छ र यसैले भोजन, पूरक र औषधि उद्योगहरूको लागि बहुमूल्य सक्रिय यौगिकहरू छन्।
निकासीको लागि, पूरा जेलीफिश, मेगोगला (जेलीफिश छाताको मुख्य भाग = = वा मौखिक-ह्यान्डहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ।
अल्ट्रासोनिक निष्कर्ष एक कुशल र तीव्र प्रविधी हो जो ठूलो मात्रा मा जेलीफिश देखि कोलेजन को उत्पादन गर्दछ।
अल्ट्रासोनिक कोलाजन निकासी को लाभ
खाना / फार्मा ग्रेड कोलेजन
उच्च आणविक वजन
अमीनो एसिड संरचना
अल्ट्रासोनिक एसिड & अल्ट्रासोनिक-एन्जाइमेटिक एक्स्ट्रक्शन
अल्ट्रासोनिक निष्कर्ष जेलिफिश बाट एसिड घुलनशील क्यालेजन (एएससी) को रिलीज गर्न विभिन्न एसिड समाधान संग संयोजन मा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अल्ट्रासोनिक cavitation जेलिफिश सब्सट्रेट र एसिड समाधान को बीच सेल संरचनाहरु र एसिड फ्लु सब्सट्रेट मा फैल को बीच मा जन स्थानांतरण को बढावा गर्दछ। यसैले, कोलेजन साथै अन्य लक्षित प्रोटीनहरू तरलमा हस्तान्तरण गरिन्छ।
पछिल्लो चरणमा, बाँकी जेलीफिश सब्सट्रेट एप्सिसिमेसन (यानी पिप्सिन) को साथ पिडसन घुलनशील कोलागेन (पीएससी) को अलग गर्न अल्ट्रासोनिकेशन अन्तर्गत उपचार गरिन्छ। सोन्याशनले एन्जाइम गतिविधि बढाउनको क्षमताको लागि चिनिन्छ। यो प्रभाव अल्ट्रासोनिक फैलावट र pepsin एकत्र को deagglomeration मा आधारित छ। समृद्ध रूप देखि एंजाइमहरु लाई मार्जिन ट्रांसफर को लागि बढयो सतह प्रदान गर्दछ, जो उच्च एन्जाइम गतिविधि संग सम्बन्धित छ। साथै, शक्तिशाली अल्ट्रासाउन्ड तरंगहरू कोलेजन फ्रिबिलहरू खोल्छ ताकि कोलेजन रिलीज हुन्छ।
अनुसन्धानले देखाएको छ कि अल्ट्रासोनिक रूप देखि सहायता एंजाइम (पप्सिन) निष्कर्षण परिणाम उच्च उपज र एक छोटा निकासी प्रक्रिया मा।
UIP4000hdT (4kW) अल्ट्रासोनिक निष्कर्षण प्रणाली
उच्च प्रदर्शन अल्ट्रासोनिक्स कोलेजन उत्पादन को लागि
उच्च शक्ति अल्ट्रासोनिक प्रोसेसरहरूबाट ल्याब पायलट र औद्योगिक मापन
निकोलस एमएम खनौ, फातिमाह एमडी। यूसुफ, बी जमिलाह, महिनरी बासरी, आई। मेजना, किम वे चान, नर्डिन अर्मेनिया, जून निशावा (2018): जेल्फीफ (एक्रोमेटस हार्डिनबर्ग) बाट सुधारिएको कोलाजन निकासीले भौतिक-प्रेरित घुलनशील प्रक्रियाहरु बढाएको छ। खाद्य रसायन ज्वाला। 251, 15 जुन 2018. 41-50।
Guoyan रेन, Bafang ली, Xue Zhao, Yongliang जुआंग, Mingyan यान (2008): जेलीफिश (रोप्लिमा esculentum) बाट ग्लिसकोपिनिन को निकासी को लागि अल्ट्रासाउंड-सहायता निकासी को मौखिक मौखिक हथियार। चिनियाँ सोसाइटी अफ एग्रीकल्चरल ईन्जिनियरिङ्को 2008-02।
Guoyan रेन, Bafang ली, Xue Zhao, Yongliang जुआंग, Mingyan यान, हू Hou, Xiukun Zhang, ली चेन (200 9): जेलिफिश (रोप्लिमा Esculentum) मौलिक हथियारबाट उच्च प्रदर्शन तरल क्रोमैटोग्राफी देखि ग्लियोकोट्रिनिनहरुको लागि निकासी विधिहरु को स्क्रीनिंग। चीन 2009को महासागर विश्वविद्यालयको जर्नल, वॉल्यूम 8, अंक 1. 83-88।
कोलागेन ट्रिपल हेलिक्स संरचना र बाह्रकीय मैट्रिक्स र कनेक्टिविटी ऊतकमा प्रमुख अघुलनशील फाइबिस प्रोटीन छ। कम्तिमा 16 प्रकारका कोलागन्सहरू छन् तर तिनीहरूमध्ये प्रायः लगभग (लगभग 90%) टाइप गर्नुहोस्, II टाइप गर्नुहोस्, टाइप गर्नुहोस् II, र टाइप गर्नुहोस् III। कोलेजन हड्डी, मांसपेशी, छाला र तरकारीमा पाइने मानव शरीरमा सबैभन्दा प्रचुर मात्रामा प्रोटीन हो। स्तनपानमा, यसले सम्पूर्ण शरीर प्रोटीनको 25-35% योगदान गर्दछ। निम्न सूचीले ऊतकहरूको उदाहरण दिन्छ जहाँ कोलाजन प्रकार सबैभन्दा प्रचुर मात्रामा हुन्छन्: I-bone टाइप गर्नुहोस्, डर्मिस, क्यान्सर, लिगामेंटहरू, कन्नेनिया; द्वितीय-कार्टिलेजर टाइप गर्नुहोस्, भिटामिन शरीर, नेक्लियस पेप्पासस; तेस्रो-छाला टाइप गर्नुहोस्, पोत पर्खाल, अधिकांश ऊतकहरू (रिफ्रेश, लिभर, स्पिन, आदि) को रेशेली फाइबर; IV-तहखाने झिल्ली टाइप गर्नुहोस्, प्रकार V-प्रायः टाइप आई कोलेजनसँग सह-वितरण गर्दछ, विशेष गरी कोनेडामा। यो स्वाभाविक रूपमा मानक प्रचुरता कोलेगन्स (कोलेगेस I-V) को व्यावसायिक शोषणको पक्षमा, पारंपरिक, उच्च उपन्यास निर्माण प्रक्रियाहरु द्वारा प्रायः मानव, बोसिन र पोर्सेइन ऊतकबाट अलग-अलग र शुद्ध गरेर, उच्च गुणवत्ता कोलेजन ब्याच को लागी। (सिल्वा एट अल।, मार्च ड्रग 2014, 12)
Endogenous कोलेजन शरीर द्वारा संश्लेषित एक प्राकृतिक कोलेजन हो, जबकि exogenous कोलेजन सिंथेटिक हो र बाह्य स्रोत जस्तै पूरक को रूप मा आउन सक्छ। कोलागेनले शरीरमा, विशेषतया छाला, हड्डिहरु र कनेक्टिविटी ऊतकमा पाइन्छ। एक जीवमा कोलेजन उत्पादन उमेर र धूम्रपान र यूवी प्रकाश जस्ता कारकहरूसँग निस्कन्छ। औषधिमा, कोलागेनको प्रयोग गर्न को लागी नयाँ छालाका कोशिकाहरूलाई आकर्षित गर्न कोलोन घास ड्रेसिङमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
कोलाजेन पूरक र फार्मास्यूटिकल्समा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ जुन यो रिसोरब हुन सक्छ। यसको मतलब यो यसलाई टुक्रा, बदल्न सकिन्छ, र शरीरमा फिर्ता लिइन्छ। यो पनि संकुचित सोसाइटीहरू वा पनीर-जस्तै जल्सहरूमा बनाइन्छ। यसको विस्तृत दायित्व र यसको प्राकृतिक घटनाले यसलाई क्लिनिक रूपमा बहुमुखी बनाउँछ र विभिन्न प्रकारका चिकित्सा उद्देश्यका लागि उपयुक्त बनाउँछ। चिकित्सा प्रयोगको लागि, कोलागेन बोभिन, पोर्सेन, भेडा, एक समुद्री जीवबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ।
जनावरहरूबाट कोलेजन अलग गर्न चार प्रमुख तरिकाहरू छन्: सेल्टिङ-आउट, एल्किन, एसिड, र एंजाइम विधि।
एसिड र एंजाइमेट विधिहरू प्राय: उच्च गुणस्तर कोलागेनको उत्पादनको लागि संयोजनमा प्रयोग गरिन्छ। कोलागेनका भागहरू एसिड-घुलनशील कोलागेन (एएससी) हो र अन्य भागहरू पेप्सिन-घुलनशील कोलागेसन (पीएससी) हुन्, एसिड उपचार पछि एंजाइमिक पेप्सिन निकासी हुन्छ। एसिड कोलेजन निष्कर्षण कार्लोलिक एसिड जस्ता क्लोराइनेटिक, साइट्रिक वा ल्याक्टिक एसिड प्रयोग गरी गरिन्छ। एसिड कोलेजन निष्कर्षण प्रक्रिया को बाँकी सामाग्री देखि pepsin-soluble कोलेजन (पीएससी) को रिलीज गर्न को लागि, नलसाजी पदार्थ एंजाइम pepsin संग pepsin घुलनशील कोलेजन (पीएससी) को अलग गर्न को लागी उपचार गरिन्छ। पीएससी सामान्यतया 0.5M को एसिटिक एसिड संग संयोजन मा लागू गरिन्छ। Pepsin एक साधारण एंजाइम हो किनकि यो प्रोटीन चेन र गैर हेलिक्स पेप्टाइड एन-टर्मिनलमा सफा गरेर कोलागेन संरचना बनाए राख्न सक्षम छ।
कोलागेन पोषण सप्लामे (पोषक तत्वहरु), कस्मेटिक उत्पादन र औषधिमा प्रयोग गरिन्छ। स्तनपान र समुद्री (माछा) कोलेजन बजारमा उपलब्ध छ र कुनै पनि मात्रामा किन्न सकिन्छ। जेलीफिश कोलागेन कोलागेन को एक नयाँ रूप हो, जुन मानव बायोकोप्टेबल र गैर-स्तनपालन (डिसेज-मुक्त) हो। जेलीफिश कोलागेनले कुनै पनि प्रकारको कोलेजन (IV टाइप) मेल खाँदैन, तर यो कोलेजन प्रकारको, II र V. को विभिन्न गुणहरू प्रदर्शन गर्दछ।
धेरै प्रकारका जीवहरु मा जीवाकोटोटिनहरु लाई जीवाणुहरु बाट मानिसहरु लाई भेटिन्छ र विभिन्न प्रकार्यहरू छन्। छोटो ओलिलोसैक्क्रराइड श्रृंखलाहरूमा यी प्रोटीन सेल सेल पहिचानमा हार्मोन, भाइरस र धेरै सेलुलर घटनाहरूमा अन्य पदार्थहरूले संलग्न हुन्छन्। यसको अतिरिक्त, सेल सतह एन्टिग्रेसन अप्रेलिकल म्याट्रिक्स तत्व, गस्ट्रोइन्टस्टिनल र यूरेनेलियटल मार्ग को माइक्रिन स्रावको रूपमा सेवा गर्दछ। एल्बमिन को छोडेर प्लाज्मा को लगभग सबै विश्वव्यापी प्रोटीनहरु, गुप्त एंजाइमहरु र प्रोटीनहरुमा ग्लियोकोट्रिनन संरचना छ। सेल झिल्ली प्रोटीन, लिपिड र कार्बोहाइड्रेट अणुहरु बाट बनाइएको छ। सेल झिल्लीमा glycoproteins को भूमिका, अर्कोतर्फ, प्रोटीन को संख्या र वितरण को प्रभावित गर्दछ। यी प्रोटीनहरू झिल्लीबाट झिल्लीबाट संक्रमणमा संलग्न हुन्छन्। Glycolipids र glycoproteins को संख्या र वितरण सेल विशिष्टता प्रदान गर्दछ।
कोशिकाओं को मान्यता को लागि ग्लियोकोपीटीनियन्स जिम्मेदार छन्, सेल झिल्ली को चयनत्मक पारगम्यता र हार्मोन को माथि उठाना। Glycoproteins को कार्बोहाइड्रेट भाग मा7मोनोसक्रेराइड्स को मुख्य प्रकार छन्। यी मोनोसक्चराइड्सले विभिन्न क्रमबद्ध र विभिन्न बांड ढाँचाहरूसँग जोड्दछन्, जसले गर्दा कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला संरचनाहरूको ठूलो संख्या हो। एक ग्लाइकोप्टोइनिनमा एक एन-लिङ्क गरिएको ओलिलोसएक्चरराइड संरचना हुन सक्छ वा एक भन्दा बढी प्रकार ओलिल्कोसेक्राइडाइड हुन सक्छ। N-linked Oligosaccharides एकै वा फरक ढाँचा हुन सक्छ वा O-linked oligosaccharides मा पनि हुन सक्छ। ओलिलोसोसेक्राइड श्रृंखलाको संख्याले प्रोटीन र प्रकार्यमा निर्भर गर्दछ।
ग्लियोकोट्रिनिन्समा आइसिक एसिड, ग्लियोकोलीक्सको एक तत्व, सेलहरूको पहिचानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। यदि सायिकिक एसिड कुनै पनि कारणको लागि नाश हुन्छ भने, झिल्लीको ग्लियोकोलीक्स संरचना बाधा भइरहेको छ र सेलले अधिक निर्दिष्ट कार्यहरू प्रदर्शन गर्न सक्दैन। साथै, केहि संरचनात्मक ग्लिसकोपोटिनहरू छन्। तिनीहरू fibronectins, laminins, भ्रूण fibronectins छन् र तिनीहरू सबै शरीर मा विभिन्न मिशन छन्। यो पनि ईुक्रीटिक ग्ल्याकोप्टोटिनहरूमा, त्यहाँ केहि मोनोसकेचराइडहरू प्रायः हेक्सेस र एमिनोएक्सक्स प्रकारमा छन्। तिनीहरू प्रोटीन तहमा सहयोग गर्न सक्छन्, प्रोटीनको स्थिरतामा सुधार र सेल सिग्नलमा संलग्न हुन्छन्।